ट्रेड युनियनको इमान्दार सिपाही हुँ : अजय राई (उपाध्यक्ष खुला) Darpansansar News
यतिबेला नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको छैठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा जारी छ । युनियनको नेतृत्वका लागि पुष्कर आचार्य र खिलानाथ दाहाल समूह प्यानल नै बनाएर मैदानमा होमिएका छन । आचार्य समूहबाट विराटनगर निवासी अजयकुमार राई खुल्ला उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धामा छन ।
सबै मजदुरसँग उस्तै परिचय र सम्वन्ध स्थापित गरेका राई लामो समयदेखि श्रमिक आन्दोलनमा क्रियाशील छन । उनी ट्रेड युनियन कांगे्रस आबद्ध हुने मात्रै होइन याताायात मजदुर संघको एक पूर्ण अवधि केन्द्रीय सदस्य, महासचिव र लगातार ३ अवधि अर्थात् १५ वर्ष केन्द्रीय अध्यक्ष भइसकेका छन् ।
लामो समयदेखि इन्टरनेशनल ट्रान्सपोर्ट वर्कस फेडेरेशन, लण्डनका एसिया प्रशान्त क्षेत्रको कार्यसमिति सदस्यसमेत भइसकेका राईसँग चुनावी एजेण्डा, भावी योजनालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी :
तपाईंको उम्मेदवारी के का लागि ?
पुष्कर आचार्य समूहबाट खुला उपाध्यक्षतर्फ मेरो उम्मेदवारी हो । मैले लामो समयसम्म यातायात मजदुर संघमा रहेर यातायात श्रमिकका पक्षमा काम गरें र यसपटक ट्रेड युनियन कांगे्रसमा बसेर सबै प्रकृतिका श्रमिक कर्मचारी साथीहरूका हकअधिकारका पक्षमा काम गर्नका लागि र मैले लामो समयसम्म संघमा काम गरेको अनुभवलाई व्यवहारमा उतार्न सबै मजदुरको सुझाव अनुसार उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
तपाईंलाई नै मत दिने तपाइका बलिया एजेण्डा के के छन ?
म ट्रेड युनियनको इमान्दार सिपाही हुँ । मैले मेरा टिमका सबै साथीभाइहरूको सहयोगले यातायात मजदुर संघलाई संस्थागत रुपमा स्थापित गरेको छु । म आफू लामो समयदेखि श्रमिक आन्दोलनमा समर्पित छु, यो श्रमिक आन्दोलन राष्ट्रिय अन्तर्रा्ष्ट्रिय रुपमा बुझेको छु । विदेशी श्रमिक आन्दोलनका नेता तथा विदेशी ट्रेड युनियनहरूसँगको सम्बन्ध राम्रोसँग स्थापित गरेको छु ।
त्यो सम्बन्धलाई ट्रेड युनियन कांगे्रस आबद्ध सदस्यहरूलाई सहयोगका रुपमा उतार्न सक्छु । ऊर्जावान् ढंगले नयाँ सोच र प्रविधिका साथ काम गर्ने लक्ष्य राखेको छु । मैले बुझेको ट्रेड युनियन भनेको र्या्डिकल हुनुपर्दछ । तर, त्यो अहिले भुत्ते भएको छ । त्यसलाई धारिलो बनाउन पनि हामीजस्तो ऊर्जावान् व्यक्तिहरू आउनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ । र, म जहिले पनि वर्गीय आन्दोलनका अभियन्ता भएकाले पनि सबै साथीहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दछु ।
नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनका चुनौती क ेक देख्नु हुन्छ ?
वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले बहुमतको दम्भमा मजदुर संगठनहरूलाई निस्तेज पार्न खोेजेको अनुभूति भइरहेको छ । मन्त्रीहरूले ट्रेड युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू सार्वजनिक रुपमा बोल्दै हिंडेकाले प्रथम चुनौती त्यही नै देख्दैछु ।
लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षकहरूको स्थायी नगरेको अवस्था छ ।
कारखाना श्रमिकका विपक्षमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याइएको छ, त्यो चुनौती छ । नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन आएको छ । त्यो नियमावली बनाइकन लागू गराउनुपर्ने अवस्था छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय रुपमै रोजगारीहरू औपचारिक क्षेत्रबाट अनौपचारिक हुँदैछ । त्यो सबलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौतीसमेत रहेको छ । हाम्रो समूहले विजय हासिल गरेमा ती सबै मुद्दाहरूमा प्रतिबद्ध भएर समाधानका लागि लाग्ने प्रण समेत गर्दछु ।
संस्थाको अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध कस्तो हुन्छ यहाँ नेतृत्वमा पुगे पछि ?
ट्रेड युनियन कांगे्रस भनेको अन्य भातृ संस्था जस्तो हैन । यसको आफ्नै छुट्टै प्रकारको विशेषता छ र वैदेशिक सम्बन्ध रहेको छ । अहिले पहिलेभन्दा वैदेशिक सम्बन्ध अलि कमजोर जस्तो देखिन्छ । त्यसर्थ त्यसलाई बलियो बनाउन म लागिपर्नेछु ।
म लामो समयसम्म इन्टरनेशनल ट्रान्सपोर्ट वर्कस फेडेरेशनको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको सदस्य भएको र भारतीय ट्रेड युनियन महासंघका नेताहरूसँग पनि मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो रहेकाले आपसी भाइचारा कायम गर्दै सालमा १–२ वटा अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था गर्नेछु । र, म इमान्दारीका साथ भन्छु मलाई ट्रेड युनियन कांगे्रसको पदाधिकारी भएर विदेश जान रहर चाहिं छैन ।
म २४ वर्षको उमेरमा अविवाहित हुँदै गरेको समयमा संगठनबाट १ हप्ते ट्रेड युनियनको तालिममा जर्मन गएको हुँ । यदि त्यस्तै थियो पैसा कमाउने रहर थियो भने म पलायन पनि हुन्थें होला, त्यसपछि पनि पटक–पटक वैदेशिक तालिम, बैठकका लागि विश्वमान चित्रका विकसित देशहरू गएको छु । तर, मैले मेरो जीवन नै यो श्रमिक आन्दोलनमा लगाउनुपर्छ भनिकन आन्दोलनलाई छाडेर पलायन भएको व्यक्ति पनि हैन ।
तपाईंको जितका आधार के के छन ?
लामो समयदेखि देशभर संगठन गर्र्दै हिंडेको छु । सबै साथीभाइलाई चिन्छु । म ट्रेड युनियन विषयको प्रशिक्षक पनि हुँ र त्यसको माध्यमबाट मैले धेरै साथीहरूलाई तालिम दिलाउने अवसर प्राप्त गरेको छु । तिनै प्रशिक्षार्थी कोही आबद्ध संघको अध्यक्ष, महासचिव, जिल्ला टे«डको अध्यक्षहरू हुनुभएकाले ती सबै साथीहरूबाट सहयोग पाउँदैछु । त्यो मेरो जितको आधार पनि हो । म निरन्तर आन्दोलनमा छु । कहीं कतै विचलित भएको छैन र म कहिं कतै ट्रेड युनियनको नाममा पलायन भएको पनि छुइन् ।
मैले यातायात मजदुर संघ छाड्दै गर्दा यातायात मजदुर संघको कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाएर छाडेको छु । चैतमा भएको संघको अधिवेशनमा सबै कार्यसमिति निर्विरोध चयन गराउन सफल भएँ । त्यो नेतृत्व गर्ने क्षमता भएर नै होला । त्यसर्थ यी सबै कारणहरू मेरा जितका आधार हुन् र म ढुक्क छु ।
सञ्जय कुमार दाहाल, उम्मेदवार केन्द्रिय सदस्य (खुला) नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको ...
पुष्कर आचार्य अध्यक्ष पदका उम्मेदवार, नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस मजदूर आन्दोलनको उद्गम ...
काठमाडौं । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले देशैभर लज्जास्पद पराजय ...
नेपालको पश्चिम पहाडी जिल्ला पर्वतमा जन्मिएका अर्जुन श्रेष्ठ यतिबेला युरोपको समृद्ध मुलुक ...
मेयर पदका उम्मेदवार सूर्योदय नगरपालिका, इलाम विद्यार्थी जीवनदेखि प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता ...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद चन्द्र भण्डारी प्रखर र स्पष्ट बक्ताका रुपमा ...
काठमाडौं – हाम्रो राजधानीलाई ब्यबस्थित र बिकसित बनाउने मुख्य जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको ...
‘मेरी बास्सै’ टेलिश्रृखंलाबाट स्थापित भएका चर्चित हाँस्यकलाकार दम्पती सिताराम कट्टेल ...
नेपालको राजनीतिमा यतिबेला दुई राप्रपाबीचको एकताले राम्रै चर्चा पाइरहेको छ । पार्टी ...